Reorganization ufumana i-nkqubo yenzelwe ukuba ukuvuseleleka a financially bakhathazeka okanye bankrupt ifemi. A reorganization ibandakanya i-restatement zexabiso namatyala, ngokunjalo ubambe ithetha nge-creditors ukuze enze amalungiselelo ekulondolozeni repayments. Reorganization ufumana i-umzamo yandisa ubomi inkampani iyonela kububanzi bephepha bankruptcy ngokusebenzisa ezikhethekileyo amalungiselelo kwaye restructuring ukuze nciphisa malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-elidlulileyo kwiimeko reoccurring. Ngokubanzi, reorganization marks utshintsho kwi yenkampani irhafu bokusebenza. Reorganization unako kanjalo zithetha utshintsho kwi-isakhiwo okanye umnini inkampani nge-ukudibana okanye consolidation, spinoff acquisition, ukugqithisa, recapitalization, okanye tshintsha isazisi okanye ulawulo bokusebenza. Ngolo endeavor kanjalo yaziwa njenge ‘restructuring.’ Kuqala uhlobo reorganization ngu supervised nge inkundla kwaye ezijolise restructuring a yenkampani yezimali emva bankruptcy.
Xa bankruptcy inkundla lilo eliya kuphumeza a reorganization isicwangciso, inkampani kuya kubuyekeza creditors ukuba eyona yayo nako, ngokunjalo restructure yayo yezimali, imisebenzi, ulawulo kwaye nantoni na ongomnye lithatyathwa kuyimfuneko ukuba ukuvuseleleka kuyo. U.S. bankruptcy umthetho unika uluntu iinkampani i-khetho kuba reorganizing kunokuba liquidating. Ngapha Isahluko se- bankruptcy, firms unako renegotiate zabo ityala kunye zabo creditors ukuzama ukufumana ngcono mimiselo. Umsebenzi uyaqhuba zokusebenza imisebenzi kwiintlanganiso repaying yayo amatyala.
Oko sibonwa a drastic inyathelo kwaye inkqubo imbaxa kwaye expensive
Firms ukuba ingaba akukho ithemba reorganization kufuneka bedlule Isahluko bankruptcy, kanjalo kuthiwa»liquidation bankruptcy.»A reorganization ngu ngokuqhelekileyo elibi kuba shareholders kwaye creditors, abo babe kuphulukana nayo ebalulekileyo isiqingatha okanye zonke zabo yotyalo-mali. Ukuba inkampani emerges ngempumelelo kwi-reorganization, isengakhupha entsha izahlulo, nto leyo iza wipe ngaphandle wangaphambili shareholders. Ukuba reorganization asiphumelelanga, inkampani uza liquidate kwaye ngalo ngaphandle nayiphi na impahla yexabiso eseleyo. Shareholders baya kuba ngabokugqibela kumgca ukufumana nayiphi na proceeds kwaye ukholisa afumane nto ngaphandle kokuba imali ekhohlo phezu emva ukubhatala creditors, yabalawuli lenders, bondholders kwaye usuke waba stock shareholders. Yesibini uhlobo reorganization kubaluleke ngakumbi kusenokwenzeka ukuba abe iindaba ezimnandi kuba shareholders ngaloo kulindeleke ukuphucula yenkampani yokusebenza. Ukuze uphumelele, reorganization kufuneka baphucule a yenkampani kwezigqibo izakhono kwaye uphumezo. Olu hlobo reorganization unako zenzeke emva kokuba inkampani yenza entsha i-CEO.
Kwezinye iimeko, yesibini uhlobo reorganization yi precursor lokuqala uhlobo
Ukuba yenkampani umzamo e reorganizing ngokusebenzisa into efana a ukudibana asiphumelelanga, babe elandelayo zama ququzelela kwakhona nge-Isahluko se- bankruptcy
FREE ISEMTHETHWENI INGCEBISO KWI IZINDLU IMIBA